fanontaniana Aircraft Deisgn
1 taona 9 volana lasa izay #810 by jimos
1 taona 6 volana lasa izay - 1 taona 6 volana lasa izay #952 by DRCW
Salama, eny afaka manampy anao aho amin'ny fampiasana fiaramanidina efa ampiasainao sy hanoroako anao ny fomba hanitsiana ny rakitra cfg fiaramanidina mba hampitomboana ny habakabaky ny fiaramanidina. Raha mbola tsy nanokatra fika cfg talohan'ny hahitanao azy dia miankina amin'ny dikan-inona izany P3D ianao dia manana. Ny dikan-teny 1,2, ary ny 3 dia tokony ao amin'ny Program x (86) ao anatin'ny solosainao. Raha manana ianao P3Dnapetraka v4 dia hita ao amin'ny fenitra nataonao Folder folder ambany Lockheed Martin. Izao aho mila fantariko raha prop na jet na mpanapaka azy ireo mpanafika anao. Raha propon izany dia mila fantariko raha nasiana turbo izy io. Raha tsy misy izany fampahalalana izany dia tsy afaka mitarika anao fotsiny aho amin'ny alàlan'ny ohatra: haka motro 2 maoderina ho an'ity exorcise ity aho. Vantany vao sokafanao ilay Folder Lockheed Martin, midira mankany simobjectssokafy, sokafy ary dia hahita ny fiaramanidinas folder, sokafy izany ary tadiavo ny seranam-piaramanidina tianao hanovana. Raha vao manokatra ny seranan-tsoavaly izay nosafidianao dia hisy tsenan'ny rakitra fiaramanidina cfg . Raha ity no fotoana voalohany nanokafanao file cfg, tsindrio havanana azy ary sokafy miaraka amin'ny "notepad" Raha toa ka ny programa dia milaza fa mila fahazoan-dàlana ianao, dia tsindrio fotsiny, ary ahereno ny bokotra fiaramanidina manontolo ho any amin'ny desktopo. ny fanovana.
kosong_weight = 3410 // (pounds)
engine_type = 0 // 0 = Piston, 1 = Jet, 2 = Tsy misy, 3 = Helo-Turbine, 4 = Retanosy, 5 = Turboprop
solika_flow_scalar = 1.0 // scalar mikoriana solika Ampifamadiho ny 1.0 fiovana isan-karazany ka novakiany 0.48
min_throttle_limit = 0.0 // Fikorohana ambany indrindra isan-jato. Amin'ny ankapobeny dia ratsy ho an'ny mpamadika turbine
power_scalar = 1.0 // Piston scalar
compression_ratio = 6.0 // ratio mampitambatra
max_rated_rpm = 2300 // Max nomena RPM
max_rated_hp = 450 // Max nomena HP hanova ny 450 amin'ny isa ambony kokoa amin'ity tranga ity dia hanampy aho 200 hp ka lasa 450 650